အလုပ်အကိုင်ရဲ့အနာဂတ်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိရဲ့လား။ - WorldRef
အောက်တိုဘာလ 5th, 2021
အလွတ်တန်းအလုပ်ဆိုတာတီဗီမှာပြသတဲ့စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကော်ဖီလောင်စာဆီလုပ်ငန်းပါ။ OECD နိုင်ငံများတွင် gig လုပ်သားအများစုသည် ၀ န်ဆောင်မှုကဏ္inတွင်ရှိသည်။
By Anthony Hussenot ဖြစ်သည်
အဖွဲ့အစည်းလေ့လာရေးပါမောက္ခ၊ တက္ကသိုလ် Nice Sophia Antipolis (UNS)
ယနေ့ freelancer များကိုကိုယ်စားပြုသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လုပ်သားအင်အား ၃၅%မရ။ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ နှုန်းက ၁၆.၁%မရ။ ကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုလုံးသည်တူညီသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကိုပြသသည်။ တီထွင်ဖန်တီးမှုစွန့် ဦး တီထွင်သူများမှအလုပ်အားပေးသောသူများအထိ၊
ဒါတွေလည်းပါတာပေါ့ ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း သတင်းထောက်များ၊ လူမှုဗေဒပညာရှင်များ၊ လူသားအရင်းအမြစ်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဘဝနည်းပြများနှင့်အလွတ်တန်းသမားများကိုယ်တိုင်ပင်ဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသောကြောင့်ဤဖြစ်စဉ်၏အမှန်တရား"Freelance အကြောင်း
၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံခေါ်သော“ gig economy” ကြောင့် Janus ရင်ဆိုင်ရပြီးမဆုတ်မနစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Freelance ကိုမကြာခဏလွတ်လပ်မှု၊ အားဖြည့်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိမှုတို့အဖြစ်သရုပ်ဖော်သော်လည်းလက်တွေ့မှာပိုရှုပ်ထွေးသည်။
OECD နိုင်ငံများတွင်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရဤပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဓိကအားဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည် ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ (အမျိုးသား ၅၀% နှင့်အမျိုးသမီး ၇၀%) အကြွင်းအကျန်သည်အွန်လိုင်းအကူများမှဗိသုကာများ၊ ဒီဇိုင်နာများနှင့်ဓာတ်ပုံဆရာများအထိအရာအားလုံးဖြစ်သည်။
A 2017 လေ့လာချက် OECD နိုင်ငံများရှိအလွတ်တန်းသမားအများစုသည်“ slashers” များဖြစ်ကြပြီးသူတို့၏စာချုပ်သည်အခြားအချိန်ပိုင်းသို့မဟုတ်အချိန်ပြည့်ရာထူးတို့ကိုဖြည့်စွက်ပေးခဲ့သည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Lyft နှင့် Uber ကဲ့သို့ကားဝေစု ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူများအားကိုယ်ပိုင်ယာဉ်များကိုငွေထုတ်လုပ်သူများအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်
ဤအပို ၀ င်ငွေများသည်သိသိသာသာကွဲပြားနိုင်သည်။ တစ်လမှာနာရီအနည်းငယ်သုံးတဲ့သူတွေ လမ်းညွှန်လက်စွဲတည်းဖြတ်ခြင်း အိမ်မှတစ်လလျှင်ယူရိုရာဂဏန်းရနိုင်သည်။ အလွတ်တန်းလုပ်ငန်းခွင်ကုထုံးပညာရှင်များသည်ဤအချိန်၌အလုပ်လုပ်ခြင်းထက်ဆယ်ဆပိုဆွဲနိုင်သည် ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်း.
လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခြင်းရဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမျက်နှာဖြစ်နိုင်တာကိုခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ် ဖန်တီးမှုအတန်းဆက်သွယ်ရေး၊ မီဒီယာ၊ ဒီဇိုင်း၊ အနုပညာနှင့်နည်းပညာတို့တွင်ကျွမ်းကျင်သော၊ လျင်မြန်သော၊ ချိတ်ဆက်ထားသော၊ အဆင့်မြင့်ပညာရှိသော၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုပ်သားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
သူတို့သည်ဗိသုကာများ၊ ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ဘလော့ဂါများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်တူသည်၊ အလုပ်မှာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက်အကျော်ကြားဆုံးသည်လူမှုရေး“ သြဇာသက်ရောက်မှုများ” ၏အခန်းကဏ္မှအဆုံးသတ်သည်။
လန်ဒန်တွင်စီးပွားရေးပညာရှင် Douglas McWilliams ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာအတွက်ဤအဖွဲ့သည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသည်။flat-white စီးပွားရေးစီးပွားရေး၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဆန်းသစ်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအခြေခံတဲ့ရှင်သန်တိုးတက်နေတဲ့ကော်ဖီလောင်စာစျေးကွက်
“ hipsters” ဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ကြသောဤ hipsters များပညာရှင်များ“ သူတို့ရဲ့ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ ဖောက်သည်အရေအတွက်အများကြီးနဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမှာအတော်လေးအောင်မြင်နိုင်တယ်။ McWilliams များအတွက်၎င်းတို့သည်ဗြိတိသျှသာယာဝပြောရေး၏အနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုရုံသာဖြစ်နိုင်သည်။
အလွန်မြင့်မြတ်သောပုံစံဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ကြိုးစားခြင်းသည်သော်လည်းကောင်း“ မရေရာသော” ဖြစ်သည်။ ဤ task-tacklers များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထပ်တလဲလဲအလုပ်များကိုသယ်ဆောင်ပြီး၊ အွန်လိုင်းတစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းကဲ့သို့မကြာခဏလုပ်ရသည် Amazon ရဲ့ Mechanical Turkမရ။ သူတို့၏ဖျော်ဖြေပွဲအများစုသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းမြင့်မားရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်အလွယ်တကူလဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
ဤအွန်လိုင်းအကူအညီပေးသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်လုံခြုံရေးသည်အာမခံချက်မရှိပါ၊ ၎င်းတို့သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းတွင် ၀ န်ထမ်းများကဲ့သို့အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအကျိုးခံစားခွင့်များလုံးဝမရှိနိုင်ပါ။
ဖန်တီးမှုလူတန်းစားနဲ့ရုန်းကန်နေသူတွေအကြား အနားသို့ရောက်ရန်လုံလောက်သောပွဲများကိုကစားပါဘလော့ဂါများသည်စာရေးခြင်းကိုဝါသနာပါသော်လည်းသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဘ ၀ ကိုရရှိရန်ရုန်းကန်နေရသည်။ အွန်လိုင်းလက်ထောက်များသည်ယခင်ကအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သောသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုကျေနပ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများအဖြစ်တစ်ပတ်လျှင်နာရီအနည်းငယ်လက်လုပ်လက်စားဖြင့်ယူရိုအနည်းငယ်ပိုရသောကျောင်းသားများ
အလွတ်တန်းအလုပ်သမားများသည်မတူကွဲပြားသောလူ ဦး ရေဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သူတို့၏ပညာရေးနောက်ခံ၊ လှုံ့ဆော်မှုများ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များနှင့်အလုပ်လုပ်လိုစိတ်တို့သည်လုပ်သားတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့မတူညီဘဲကွဲပြားခြားနားသည်။ ရုပ်ပြောင်ကိုအသုံးပြုသည်.
လွတ်လပ်မှုရှာဖွေခြင်းနှင့် ၀ င်ငွေ
အလွတ်တန်းအလုပ်သည် ၉ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်းအလုပ်မှလွတ်မြောက်ရန်လူများလုပ်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
များစွာသောအလွတ်တန်းသမားများသည်မည်သည့်အလုပ်မဆို၎င်းသည်လွတ်လပ်မှု (သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းရန်ပုံရသည်) ဖြစ်သောကြောင့်ဤအလုပ်အကိုင်ပုံစံကိုမူလကတည်းကရွေးချယ်ခဲ့ပေမည်။ အားလုံးအတွက်ပါ လက်ရှိအမေရိကန်အလွတ်တန်း ၃၇ ရာခိုင်နှုန်း သူတို့ကဖျော်ဖြေရေးကိုမလိုအပ်ဘဲလုပ်ရတာလို့ပြောကြတယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၄၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်မားလာခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါက salariat ရဲ့အဆုံးမဟုတ်ဘူး။ အချိန်ပြည့်၊ ကုမ္ပဏီအခြေပြုအလုပ်သည်အလုပ်အကိုင်အတွက်စံနှုန်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည် ရုရှားကဲ့သို့အနောက်တိုင်းနိုင်ငံအများစုတွင်.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေတယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်အလိုအလျောက်တိုးတက်လာမှုနှင့်လူ ဦး ရေအကန့်အသတ်မရှိသောအလားအလာများကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည် ၀ န်ထမ်းများသိသိသာသာပိုများလာကာလုပ်ငန်းတွေပိုစလုပ်လာတာနှင့်အကြောင်းပြချက်ကရပ်နေသည်။
၎င်းသည်အလုပ်လက်မဲ့ ဦး ရေတိုးလာခြင်းကိုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းအစား၊ အဆက်မပြတ်နှင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသောကွန်ယက်များတွင်အမျိုးမျိုးသောပရောဂျက်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပုံစံပြောင်းပြီးပြုပြင်မွမ်းမံမည့်သူသည်ပိုလွတ်သောလူများကိုဆိုလိုသည်။
အလွတ်တန်းအလုပ်မြင့်တက်မှုသည်အထူးသဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအလေ့အကျင့်များအရအလုပ်အနာဂတ်၏အဓိကမြင်သာသောညွှန်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ Freelancer များသည်ပရောဂျက်များကိုပူးတွဲစီမံခန့်ခွဲရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့နေပြီဖြစ်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူတို့ဟာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများ၊ ဖောက်သည်များနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လာလိမ့်မည်။
သူတို့ကအလုပ်သမားတွေတစ်သားတည်းတူညီတဲ့လူတန်းစားမဟုတ်တာကြောင့်ဒီမန်နေဂျာအသစ်တွေကိုစီမံရတာရိုးရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ လောလောဆယ်တော့တစ်ခုတည်းမရှိဘူး လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစနစ် ၎င်းသည်အိမ်သန့်ရှင်းရေးများနှင့်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများမှဗိသုကာများနှင့်သတင်းအယ်ဒီတာများအထိသန့်ရှင်းသောအရာနှင့်လုံး ၀ ကိုက်ညီသည်။
ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူတို့ရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အလုပ်အကိုင်အကျိုးစီးပွားတွေကိုမြှင့်တင်ကာကွယ်ဖို့ဘယ်လိုအတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သလဲ။ သေချာတာပေါ့၊ အခုအချိန်မှာရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့အလွတ်တန်းအလုပ်သမားအချို့ရှိနေတယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုမူလက The conversation ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းနှင့်အညီပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives ၄.၀ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်သူ့လိုင်စင်။ သင်သည်မူရင်းဆောင်းပါးကိုဖတ်နိုင်သည် ဒီမှာမရ။ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြသောအမြင်များသည်စာရေးသူတစ် ဦး တည်းသာမဟုတ်ဘဲ WorldRef ၏အမြင်များဖြစ်သည်။
ရောင်းချသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဝယ်သူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ | အခမဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှာဖွေခြင်း | လူအင်အားန်ဆောင်မှုများ | စက်မှုဖြေရှင်းချက်များ | သတ္တုတွင်းနှင့်တွင်းထွက်ထုတ်ယူခြင်း | ပစ္စည်းကိုင်တွယ်စနစ်များ | ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဖြေရှင်းနည်းများ | ဘဏ္withာရေးနှင့်အတူပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲပါဝါ Solutions | လူအင်အားစုဆောင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှု | လူအင်အားစာချုပ် ၀ န်ဆောင်မှု | လူအင်အား Deputation န်ဆောင်မှုများ |